11 Talooyin si aad u horumarisid Naqshadaynta Xayeysiiskaaga Instagram oo aad u hesho beddelaadyo badan | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/11 Talooyin si aad u horumarisid Naqshadeynta Xayeysiiskaaga Instagram oo aad u hesho beddelaadyo badan
11 Talooyin si aad u horumarisid Naqshadeynta Xayeysiiskaaga Instagram oo aad u hesho beddelaadyo badan
Baro waxyaabaha lagama maarmaanka u ah naqshadeynta xayeysiiska weyn ee Instagram, iyo sida loo rumeeyo xayaysiiskaaga riyada.
Waxaa jira habab ka badan sidii hore oo aad xayeysiis ugu dhejin lahayd Instagram, laakiin mararka qaarkood xayaysiinta baraha bulshada waxay dareemi kartaa inay ku qaylinayso meel bannaan. Si loo sameeyo xayeysiis u horseedaya beddelaad oo abuurto ka-qaybgal, waxay ku bixinaysaa inaad qorsheyso istaraatijiyad naqshadaynta xayeysiiska ee Instagram ka hor inta aanad kicin kicinta iibsashada.
11-kan tabo ee naqshadaynta ah, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo xayaysiimaha Instgram-ka oo ay ogaadaan dadka aad beegsanayso. Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa jaangooyooyinka bilaashka ah si aad u hagaajisid habka naqshadayntaada.
Bonus: Download a xirmo bilaash ah oo ah 8 indho-qabad oo indho-qabadyo qaab-dhismeedka Instagram waxaa sameeyay Hootsuite's naqshadeeyayaasha garaafyada. Bilow joojinta suulka oo wax badan iibiso maanta.
Isticmaal naqshado fudud si aad u soo baxdo
Shaashada casriga ah kuma siinayso boos badan oo loogu talagalay farshaxanimadaada xayaysiinta. Marka ay timaado in la helo dareenka isticmaalayaasha, habka ugu yar ayaa badanaa ah midka ugu waxtarka badan.
Isku day inaad xayaysiisyadaada hoos ugu dhigto wax yar oo muuqaal ah intii suurtogal ah. Xayeysiisyada waaweyni waxba kama noqon karaan wax ka badan sawirka alaabtaada oo wata qoraal fudud, ama xitaa qoraal ku saabsan asal ka duwan!
Xayeysiiskan Risedesk wuxuu leeyahay sawir sheegaya wax kasta oo ay u baahan tahay oo leh laba qaybood oo keliya: sawirka alaabta iyo soo jeedinta qiimaha gaaban. Inteena badan waxa ay ku riyoon karnaa in aan haysano miis aan buuq lahayn sida kan xayaysiisyada ku jira, laakiin taasi macnaheedu maaha in aan dhagaystayaashayada siin karin xayaysiis u nadiifsan oo si fiican loo habeeyey sida miiska aanu hammiga ku haminay.
Midabada dhalaalaya waxay soo jiitaan kubbadaha indhaha
Midabada dhalaalaya, isbarbardhiga ayaa soo jiidanaya dareenka, iyo marka ay timaado naqshadeynta xayeysiiska Instagram weyn, dareenka ayaa ah magaca ciyaarta.
Markaad isticmaasho midabada, waxaad u fududaynaysaa isticmaalayaasha inay soo doortaan waxyaabaha muhiimka ah ee xayeysiiskaaga markay jaleecaan. Nidaamka midabka dhalaalaya wuxuu kaloo kicin karaa dareen wanaagsan oo ku saabsan shirkaddaada.
Halbeegga Midabaysan ayaa muujinaya in badeecada lafteedu aanay ahayn inay ka buuxdo midab buuxa si loo abuuro palette indho-qabad leh. Inkasta oo sharaabaadyadu ay cirro yihiin, asalka ayaa ku daraya dhalaal waxayna bixisaa kala duwanaansho isku mar ah.
Haddii aadan hubin meesha aad ka bilaabayso, waxaad isticmaali kartaa giraangiraha midabka markaad samaynayso naqshadayntaada. Isku day inaad isku dhejiso midabada dhinacyada iska soo horjeeda ee giraangiraha si ay u kala duwanaadaan muuqaal ahaan.
Alaabtaada ku hay xagga hore iyo xarunta
Si kasta oo aan u jeclaan karno sirta soo jiidashada leh, taasi micnaheedu maahan inaad ka dhigto dhagaystayaashaada inay ciyaaraan si ay u ogaadaan waxaad iibinayso.
Isticmaalayaasha Instagram waxay qaadan doonaan hal ilbiriqsi ama laba si ay u go'aansadaan inay dhaafaan xayeysiiskaaga ama ay joojiyaan oo ay eegaan. Ha u ogolaanin inay la yaabaan waxa alaabtaadu tahay.
Ka dhig badeecadaada udub dhexaadka dareenka xayeysiiskaaga. Waxaad tan ku samayn kartaa midabka alaabta, cabbirka, ama meelaynta muuqaalka, tusaale ahaan. Si kasta oo aad u sameyso, cadee waxa aad siinayso macaamiishaada.
Source: Instagram (@runtii)
Xayeysiiskan muqaalka ah ee run ahaantii wuxuu ku bilaabmayaa toogto si wanaagsan loo habeeyey oo alaabtooda ah. In kasta oo xayeysiisku ku jiro dhaqdhaqaaq badan oo firfircoon, isla markaaba waan ognahay waxa la dalacsiiyay, kaas oo noo keenaya caarada xigta…
Samee fiidiyowyo dhaqaaqa
Dhaqdhaqaaqa dilaaca bilawga xayaysiisyada fiidyaha ayaa kaa caawin doona in la dareemo. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay xayaysiisyada ka soo muuqda quudinta Instagram-ka ama bogga Sahaminta, maadaama ay kuwani haystaan ​​wakhti xaddidan oo ay ku soo jiitaan dareenka isticmaaleyaasha ka hor intaanay gudbin.
In ka badan qaab kasta oo kale, xayeysiisyada fiidyowga ah waxay ku siinayaa fursad aad uga sheegto sheeko ay macaamiishaadu ku xidhmaan. Ha ku dhaafin fursadan adigoo toogtay fiidiyowyo taagan!
Muuji kala duwanaantaada
Fiidiyowga, Ururinta, iyo Xayeysiiska Carousel dhamaantood waxay kuu oggolaanayaan inaad muujiso wax ka badan hal badeeco, ama dhinacyo badan oo hal shay ah. Tani waa fursad aad si dhab ah ugu tusi karto waxa aad u hayso macaamiishaada.
Xayeysiiska wanaagsani wuxuu yeelan doonaa kala duwanaansho, laakiin sidoo kale waxay yeelan doontaa fariin isku xiran oo wax walba isku xirta. Macaamiishaadu aad bay ugu yar tahay inay ku hawlanaadaan curiyayaasha kala duwan ee random.
Tusaalahan, Rue Saint Patrick wuxuu qaataa habka ugu yar ee xayeysiiskiisa Carousel. Isticmaalka hal qaab oo shaadh ah ayaa fariinta ku ilaalinaya in diirada la saaro isla mar ahaantaana la siinayo isticmaalaha khibrad is dhexgal ah oo ku dayanaya baadhashada dukaanka internetka ee gudaha xayeysiiska.
Ka dhig qoraalkaaga mid soo booda
Muuqaalka xayaysiisyadaadu waa qaybta ugu muhiimsan ee naqshadooda, laakiin tani macnaheedu maaha inay yihiin qaybta kaliya ee muhiimka ah. Iyo sida muuqaallada, marka ay timaado qoraalka, wax yar ayaa badanaa ka badan.
Dhambaalkaga ha soo koobo oo ilaa barta.
Nuqul erayo leh ayaa qasi kara xayeysiiskaaga, taasoo ka dhigaysa dhagaystayaashaada inay si adag u fahmaan fariinta aad isku dayayso inaad gudbiso. Qofna ma rabo inuu shaqeeyo marka ay dhex wareegayaan boggooda Instagram.
Qoraalka aad ku darayso waa inuu ahaadaa far weyn oo si fudud loo akhriyi karo. Inta badan dhagaystayaashaadu waxay ku eegi doonaan xayeysiiskaaga shaashad yar.
U fududee sida ugu macquulsan si ay u helaan fariintaada.
Qoraalka ku jira xayeysiiskan Headspace wuxuu sameeyaa wax kasta oo uu u baahan yahay iyo in ka badan. Meelaynta qoraalka waxa lagu dhex daray naqshada guud ee xayaysiiska, iyada oo qoraalka si fiican loo qaybiyay uu ku dhawaaday diirimaadka qorraxda.
Intaa waxaa dheer, qaababka farta joometeriga ah ee sans-serif waxay ku celceliyaan qaababka fudud ee indhaha iyo afka ee sawirka la socda.
Si joogto ah u ilaali
Xayeysiis kasta oo aad sameyso si dhakhso ah ayey u baabi'i doontaa, laakiin haysashada aqoonsi muuqaal ah oo joogto ah oo isku xidha dhammaan xayeysiisyadaada ayaa ka caawin doonta shirkaddaada inay ku dhegto madaxa isticmaaleyaasha.
Source: Instagram (@kritikq)
Xayeysiisyada ku jira tusaalahan ma aha kuwo isku mid ah, laakiin waxay wadaagaan walxaha muhiimka ah ee ka dhigaya qaabkooda mid la aqoonsan karo. Kritik waxay abuurtaa khadka dhex-dhexaadka ah ee joogitaankooda warbaahinta bulshada oo leh nidaamka midabka iyo qaabaynta qoraalka, iyo sidoo kale isticmaalka saddexagalka.
Haddii tani ay u muuqato wax badan oo lagu ogaanayo, waxaa jira qalab badan oo ku tusaya sida loo naqshadeeyo xayeysiiska Instagram oo leh qaabka gaarka ah ee shirkaddaada. Mid ka mid ah dariiqa ayaa ah in la isticmaalo qaab-dhismeedka, kuwaas oo aan ku soo qaadan doono dambe ee maqaalkan.
Dhig qoraaladaada si ay u shaqeeyaan
Xayeysiiskaaga Instgram-ka maaha sawir ama muuqaal kaliya. Qoraal halabuureed sidoo kale waa qayb ka mid ah waayo-aragnimada aad u soo bandhigayso dhagaystayaashaada. Sii cod la mid ah kan inta kale ee xayeysiiskaaga ah.
Iyo xayaysiisyada dhawaaqa ciyaarta leh, adeegsiga emoji ee qoraalka ku jira waxay ku dari kartaa xiisaha muuqaalka iyo cunsur madadaalo ah.
Sida qoraal kasta oo ku jira xayeysiiskaaga, hubi inaad soo koobto. Qaybta ugu muhiimsan waa inay ahaato mid muuqata iyada oo aan la taaban dheeraad ah.
Angus Reid wax badan buu ku qabsadaa qoraalkan gaaban: Waxay si toos ah ula hadlaysaa daawadayaasha waxayna siinaysaa sabab ay ku hawl galaan.
Iyo tan ugu muhiimsan, waxay tan sameyso iyada oo aan samaynin isticmaaluhu gujiyo dheeraad ah.
Samee fiidiyowyo ku shaqeeya dhawaaq la'aan
Instgram-ka, filimada aamusan ayaa wali ka caan ah hadal-haynta. Ku dhawaad ​​99% isticmaaleyaasha Instagram waxay ku arki doonaan xayeysiiskaaga aaladaha mobilada, taasoo la macno ah dadka intiisa badan waxay daawan doonaan fiidiyowyadaada iyadoo codka la demiyo. Xayeysiisyada fiidiyowgu waa inay sheegaan waxay leeyihiin xitaa marka la aamuso.
Haddii dhawaaqu muhiim u yahay fiidiyowgaaga, tixgeli inaad ku darto qoraallo xidhan. Tani waxay ka dhigaysaa mid saaxiibtinimo badan raadinta codka-off oo aad u heli kara dadka maqalka naafada ah.
Ku nadiifi naqshadahaaga tijaabada A/B
Laga bilaabo mabaadi'da naqshadeynta xayeysiiska xooggan waa wax weyn, laakiin ma jiraan wax ku garaaca aqoonta la taaban karo ee ku saabsan waxa ka dhigaya dhageystayaasha bartilmaameedka ah inay joojiyaan oo ay fiiro gaar ah u yeeshaan.
Markaad haysato dhowr fikrado naqshadeed oo adag, waxaad isticmaali kartaa tijaabada A/B si aad u ogaato kuwa ugu badan ee la hadla macaamiishaada.
Imtixaanka A/B waa hab lagu ogaado xayaysiisyada ay dhagaystayaashu ka jawaabaan. Waxay ku lug leedahay soo bandhigida noocyo kala duwan oo xayeysiis isku mid ah dad kala duwan iyo dabagalka inta jeer ee nooc kasta uu ku hawlan yahay. Tani waxay ku siinaysaa xogta dhabta ah ee ku saabsan nidaamka midabka, qoraalka qoraalka, ama badhanka ficil-ku-waca, tusaale ahaan, ugu fiican yoolalka xayaysiisyada.
Tani waxay u ekaan kartaa mid adag, laakiin waxaa jira qalab kala duwan oo loogu talagalay baaritaanka A/B kuwaas oo kaa caawin kara habkan, oo ay ku jiraan AdEspresso by Hootsuite.
Ha u ogolaanin xayaysiiskii saxda ahaa uu carqaladeeyo xayaysiisyada waxtarka leh
Waa muhiim in fikirkaaga la geliyo naqshadaha xayaysiimahaaga Instagram, laakiin ha ku dhicin soo jiidashada xayaysiiska saxda ah!
Si kastaba ha ahaatee sida cajiibka ah abuurkaaga soo socda, haddii dhagaystayaashaadu ay u arkaan wax isku mid ah marar badan, waxay bilaabi doonaan inay dareemaan daal xayeysiis ah oo ay joojiyaan dareenka.
Tani waa waxa ka dhigaya qaab-dhismeedyada xayeysiiska mid faa'iido leh. Markaad hoos u dhigto muuqaalkaaga xayaysiisyada, waxaad dib u isticmaali kartaa qaab-dhismeedkaaga si aad ugu cusboonaysiiso joogitaankaaga warbaahinta bulshada xayeysiis cusub mar kasta oo aad u baahato.
cabbirrada xayeysiiska Instagram
Iyada oo ku xidhan nooca xayeysiiska Instagram ee aad dhigayso, waxa jira hagitaan farsamo oo kala duwan oo la raaco marka la abuurayo.
Markaad naqshadaynayso xayeysiiskaaga, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso qaabkeeda (sawir, muuqaal, Carousel, ama Ururinta) iyo halka ay uga muuqan doonto abka Instagram-ka (quudinta, Sheekooyinka, Baadhista meel bannaan, ama Reels) -in kasta oo qaab kasta aanu kari karin. lagu meeleeyaa qayb kasta oo abka.
Ogaanshaha tilmaamahan ayaa kaa caawin doona inaad abuurto xayeysiisyo cajiib ah meel kasta oo ay ka soo muuqdaan. Markaad shaki gasho, Facebook for Business waxay leedahay tafaasiisha buuxda ee labada lagu taliyey iyo tilmaamaha loo baahan yahay.
Xayeysiiska sawirka Instagram
Qaababka lagu taliyay: JPG ama PNG
Cabbirka faylka ugu badan: 30 MB
saamiga lagu taliyay
Xallinta sawirka ugu yar: 1080 × 1080 pixels
Cabbirrada ugu yar: 500 pixels ballaaran
Xayeysiiska muuqaalka Instagram
Qaababka lagu taliyay: MP4, MOV, ama GIF
Cabbirka faylka ugu badan: 250 MB
Muddada fiidiyaha: 1 ilbiriqsi ilaa 60 daqiiqo
Saamiga lagu taliyay: 9:16 ee Sheekooyinka ama xayaysiisyada Reels, 4:5 ee Sahaminta ama xayeysiisyada quudinta
Xallinta ugu yar: 1080 × 1080 pixels
Xayeysiiska Carousel Instagram
Qaababka lagu taliyay
Sawirka: JPG, PNG
Fiidiyow: MP4, MOV, ama GIF
Sawirka: 30 MB
Fiidiyowga: 4 GB
Saamiga lagu taliyay: 1:1
Xallinta ugu yar: 1080 × 1080 pixels ee xayeysiisyada quudinta, 1080 × 1080 pixels ee xayeysiisyada Sheekooyinka.
Xayeysiiska Ururinta Instagram
Saamiga lagu taliyay: 1.91:1 ilaa 1:1
Cabirka ugu yar: 500 × 500 pixels
Qalabka naqshadeynta xayeysiiska ee Instagram
Uma baahnid inaad noqoto naqshadeeye xirfad leh si aad u sameyso xayeysiis muuqda. Haddii aad raadinayso dhiirigelin yar ama hagitaan faahfaahsan, waxaa jira qalabyo badan oo kaa caawinaya soo saarista hal-abuurkaaga!
Inta badan waxay bixiyaan xisaabaadka bilaashka ah marka lagu daro kuwa lacagta lagu bixiyo oo leh hawlo horumarsan.
AdEspresso waxay ku siinaysaa adeeg dhamaystiran si aad u maamusho xayaysiisyada warbaahinta bulshada Waxay isku daraysaa qalabyada naqshadaynta iyo qaab-dhismeedka sifooyin si ay kaaga caawiyaan qorshaynta istaraatiijiyaddaada xayeysiiska iyo falanqaynta natiijooyinka, oo ay weheliso qalab tijaabo ah oo kala qaybsan oo waxtar leh oo kaa caawin doona inaad sare u qaaddo ololahaaga.
Adobe Spark waxay ku siisaa agabka naqshadaynta madal ay ku dhex milmeen alaabada kale ee Adobe. Waxaa laga heli karaa browser-ka desktop-ka ama codsiga moobilka.
Ka faa'iidayso inta ugu badan ee miisaaniyada xayaysiinta ee Instagram ka AdEspresso ee Hootsuite. Si fudud u abuur, maamul, oo u hagaaji dhammaan ololaha xayaysiisyada Instagram hal meel. Isku day bilaash maanta.
Sucuri vs Wordfence - Waa kee WordPress Plugin ee Amniga?